advantages Archives - LODGGY
ပင်လယ်ရေကူးခြင်း၊ ပင်လယ်ရေထိတွေ့ခြင်း ကောင်းကျိုးများ~
December 4, 2020 Eyint Kyi Pyar Zaw	advantages, Beach, Ngapali, Ngwe Saung
မကြာခင် ခရီးတွေသွားကြတော့မယ်ဆို ဘယ် Destination တွေကို သွားဖို့ရွေးချယ်ပြီးသွားကြပြီလဲ? ဘုရားတွေဖူးမှာလား? တောင်ပေါ်တက်မှာလား? ပင်လယ်ကြီးဆီသွားမှာလား? ဒီတစ်ခေါက် Lodggy က ခရီးသွားခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးချိတ်ဆက်ပြီး ပင်လယ်ရေကူးမယ်၊ ပင်လယ်ရေကိုထိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိမလည်းဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 1.အသားအရေကောင်းမွန်ခြင်း -ပင်လယ်ရေထိတွေ့ခြင်းနှင့် ပင်လယ်ထဲရေကူးခြင်းတို့က အသားအရေကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ပင်လယ်ရေထဲမှာ မက်ကနီစီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ ကယ်ဆီယမ်၊ ကလိုရင်း ၊ ဆာလဖိတ် တို့လို သဘောဝဓာတ်တွေပါဝင်တာမို့ Skin Care လိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ Stress ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရေပျက်စီးမှုတွေ၊ နှင်းခူနှင့် အခြား အသားအရေရောဂါတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ 2.ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်ခြင်း -ပင်လယ်ရေအေးမှာရေကူးခြင်း ထိတွေ့ခြင်းက ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ Antioxidant တွေကို ထိန်းညှိ့ပေးပြီး ကင်ဆာနှင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ ပင်လယ်ရေထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဒြပ်စင်များနှင့် အဏုဇီဝသက်ရှိဟာ ဘတ်တီးရီးယားများနှင့် …
Read the full post →“ပင်လယ်ရေကူးခြင်း၊ ပင်လယ်ရေထိတွေ့ခြင်း ကောင်းကျိုးများ~”
LeaveaComment on ပင်လယ်ရေကူးခြင်း၊ ပင်လယ်ရေထိတွေ့ခြင်း ကောင်းကျိုးများ~
May 19, 2020 kyaw kyaw	advantages, Myanmar
ပန်ဝါမြို့ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က စပြီး မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက ရေခဲတဲ့ မြို့လေးဆိုပြီး နာမည်ကြီးလာတဲ့မြို့လေးပါ။ပန်ဝါကို သွားချင်ရင် မြစ်ကြီးနားကနေဆို လမ်းကြောင်းက ၂ ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက မြစ်ကြီးနား – ချီဖွေလမ်းပါ။ ဒါက ပန်ဝါကို တိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့လမ်းပါ။ မြန်မာပြည်ထဲကနေပဲသွားရတာပါ။ ဒါပေမယ့်လမ်းက သိပ်မကောင်းပါဘူး။ အချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ၇ နာရီ၊ ၈ နာရီလောက်မောင်းရပါတယ်။ လမ်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဲ့ထက်လည်း ကြာနိုင်ပါတယ်။ ချီဖွေလမ်းက လူပြတ်ပြီး လမ်းကြောတစ်လျှောက် သတ္တုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေပဲ တွေ့ရမှာပါ။ လမ်းတစ်လျှောက် တောတောင်တောင်ရှုခင်းတွေနဲ့ တော်တော်လှပါတယ်။ မေခမြစ်ရဲ့အလှအပတွေကိုလည်း ခံစားရမှာပါ။ နောက်တစ်လမ်းကတော့ မြစ်ကြီးနား – ကန်ပိုင်တည်လမ်းကနေသွားရတာပါ။ သူကတော့ တရုတ်ပြည်ဘက်က ထိန်ချူံးဘက်ကနေ ပတ်ပြီးမှ ပြန်ဝင်ရတာပါ။ လမ်းကတော့ ဖြူးနေတာပဲ။ …
Read the full post →“ကချင်ပြည်နယ်က ရေခဲတဲ့မြို့လေး ပန်ဝါ”
LeaveaComment on ကချင်ပြည်နယ်က ရေခဲတဲ့မြို့လေး ပန်ဝါ
August 25, 2017 Aung Toe	advantages, back packing, disadvantages, English, Recommendation, solo travel, Travel Tips
As we all know, traveling is one of the most popular hobby of people especially in these modern days. Many of them like to travel in group while the others love to travel solo. Here, lodggy state some facts of advantages and disadvantages of traveling alone. Advantages It will get you out of your comfort …
Read the full post →“Advantages and Disadvantages of Traveling Alone”
advantage, alone, disadvantage, solo travel, traveling aloneLeaveaComment on Advantages and Disadvantages of Traveling Alone